kiraro fingotra hany milina fanaovana, fingotra hany, 3D scanner for kiraro farany, Kiraro famolavolana ny rindrambaiko-Ningbo Lary Industry Teknolojia Co., Ltd
Lary no nanao ny vokatra fampiroboroboana sy ny fanompoana ny kiraro fingotra hany tsindrona koronosy milina,hafainganam-pandeha avo fametrahana mazava tsara & fingotra tsindrona milina, 3D scanner for kiraro farany,3D kiraro famolavolana rindrambaiko sy sns.
Fingotra tokana tsindrona koronosy Machine
Fingotra Shoe hany
Ningbo Lary Industry Technology Co., Ltd dia mpiara barotra amin'i Portiogaly TECNIROLO Engenharia Indu-strial S.A.
Lary dia injeniera & orinasa mpamokatra entana, orinasa izay handova ny foto-kevitra ny manome mpanjifa amin'ny tolotra tsara indrindra any Eoropa noho ny 26 taona.
Lary no nanao ny vokatra fampiroboroboana sy ny fanompoana ny kiraro fingotra hany tsindrona koronosy milina,hafainganam-pandeha avo fametrahana mazava tsara & fingotra tsindrona milina, 3D sca-nner for kiraro farany,3D kiraro famolavolana rindrambaiko sy sns.
Tamin'ny 1989 dia noraisiko ny Mazava ho azy fa ao amin'ny GE-Fanuc Frantsa,for Fanuc CNC mpitandrina,I \_ 'm voalohany tany Portogaly injeniera taratasy fanamarinana ho an'ny fanampiana ara-teknika,Nanomboka niasa tao CAD / CAM rafitra tamin'ny voalohany PG FANUC Mark II.
1993 namorona Tecnirolo Comp misy any Portiogaly , mirotsaka amin'ny fikarohana anddevelopment ny automati manokana CH orinasa malaza WorkNC mba hampivelatra ny feno telo-amin'ny lafiny ara-teknika machining, atthat fotoana ny umber ny orinasa, izay nanao ny hanolotra tolotra CAD / CAM orinasa vahaolana Tena vitsy eto amin'izao tontolo izao, Tecnirolo dia iray tamin'izy ireo.
In 1994, Nanomboka niara-niasa tamin'ny Amerika malaza ......
vakio More >>
mba hanome ny tena professionaltechnical Mpanolo-tsaina ny tolotra, dia mety ho amin'ny alalan'ny apers-onalized customequipment hihaona karazana rehetra mpanjifa.
dingana famokarana hampihatra fitsipika hentitra toy ny tamin'ny taona Ataovy azo antoka fanaterana ao anatin'ny fotoana nanaiky.
mandefa injeniera ny fametrahana, fanirahana, ary manome fiofanana sy ny tari-dalana ara-teknika system.Pr-ovide fanohanana ny fiainana.